Xoogaga deegaanka Galgalo oo gaadiid dagaal ku qabsaday dagaalkii maanta iyo Laag iyo Karin oo lala wareegay. | Halganka Online
Xoogaga deegaanka Galgalo oo gaadiid dagaal ku qabsaday dagaalkii maanta iyo Laag iyo Karin oo lala wareegay.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo saaka aroortii ka dilaacay deegaanada Laag iyo Karin oo u dhexeeya Boosaaso iyo degmada Galgala.
Xoogaga deegaanka Galgala iyo kuwa lamagac baxay difaaca Kheyraadka Sanaag ayaa la sheegay in ay iska kaashadeen dagaalkii cuslaa ee saaka ka dhacay Karin.
Ciidamada deegaanka Galgala oo lahaa mas’uuliyadda dagaalkii saaka ayaa gebi ahaanba la wareegay gacan ku haynta Karin iyo Laag kadib markii ay u awood sheegteen Maleeshiyaadkii Faroole.
Radiyaha ku hadla Afka maamulka Faroole ee Boosaaso ku yaal ayaa xaqiijiyay geerida 7 katirsan Maleeshiyaadka PIS-ta iyo kuwa Daraawiishta loo yaqaan balse waxaa la sheegayaa in khasaaruhu intaasi ka badanyahay.
Wararka ay SomaliMeMo ka helayso magaalada Boosaaso ayaa xaqiijinaya in xaalad kacsanaan ah ay ka jirto agagaarka shirkadda Isgaarsiinta Golis iyo Saldhigga Booliska oo la sheegay in ay joogaan Maleeshiyaad ka gadoodsan maamulka Faroole kuwaasi oo saluugsan weerarada lagu qaaday dhanka Sanaag Bari.
Shacabka degmada Galgala oo dhawaan cadaystay ku dhaqanka shareecada Islaamka ayaa maanta cadaystay in ay diyaar u yihiin in ay naftooda u gooyaan difaaca diinta alle markii ay weerareen Maleeshiyaadkii Faroole.
Ciidamo taabacsan Dadka deegaanka Galgalo oo kaashanaya Sheekh Atam ayaa la xaqiijiyay in ay jiiteen Gaadiid dagaal oo Maleeshiyada Faroole looga gubay dagaalkii maanta
Gaadiid Cadha-maydle ah oo ay wateen Maleeshiyada Faroole ayaa u gacan galay xoogaga Galgala ee weerarka soo qaaday.
Dhaawacyada labada dhinac ayaa lakala geeyay Boosaaso iyo Galgala taasi oo muujinaysa in dagaalkii saaka uu ahaa mid culus.
Warar kale ayaa xaqiijinaya in Qoryo Gacmeedyo farabadan ay gacanta ku dhigeen xoogaga Galgala waxaana hubka ay qabsadeen kamid ah PKM iyo qoryo shaam shuutaro ah oo ay CIA-da ugu deeqday Maleeshiyada Ashahaadda ladirirka ee PIS isku magacaawday.
Dagaalkii saaka ayaa tijaaba u ahaa shacabka Galgala waxayna Maamulka Faroole tuseen awoodda dagaal oo ay ku leeyihiin dhulka siman welina layslama gaarin Buuraha istiraatiijiga ah ee Galgala iyo Laag oo ku dagaalankeeda ay aqoon dheer u leeyihiin xoogaga Galgala iyo shacabkeeda ee go’aansaday ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Hadii dagaalkani sii socda waxaa meesha ka bixi doono maamulka Puntland labaxay oo ay beelo kala gedisan ku lug leeyihiin, dhanka deegaanka marka loo eego waxaa dhici doonta in dadka Galgala ay hiillo ka helaan wadaadada Bari oo aan weli dagaalka gelin.
Dagaaladan ayaa ah kuwa diini ah marka loo eego sida ay shacabka Galgala u qaateen shareecada Islaamka kadibna ay weeraro iyo handadaad kala kulmeen Maleeshiyaadka Amxaara Kalkaalka ah.
Sheekh Atam ayaa taageera buuxda ka haysta shacabka Bari iyo Sanaag wuxuuna ku naaloonayaa awood ciidan iyo taageero diini ah oo ay dadku u fidinayaan.
Wadaadkan iyo ciidankiisa ayaa ku caanbaxay u gargaaridda Dadka tabaalaysan wuxuuna gacantiisa ku dhisay Barkado iyo ceelal ay dadka danyarta ah xoolaha ka waraabsadaan taasi ayaana keeni karto in shacabkii uu soo gacan qabtay ay maanta u abaal gudaan oo ay wax ka difaacaan shareeca alle.
« Wararkii ugu dambeeyey dagaaladii ka dhacay KARIN Boosaaso.(FAAHFAAHIN). Dagaallo goos goos ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Boondheere iyo Gaari Gaashaaman oo laga gubay. »